Usape vamwe vanhu mvumo yekukanganisa zuva rako. - Asingazivikanwe - Anodudzira Pedia
Usape vamwe vanhu mvumo yekukanganisa zuva rako. - Asingazivikanwe
Hupenyu hwakakosha. Vanhu vari muhupenyu hwedu vakasarudzika asi vari munzira yekuvandudza hukama, hatifanire kuzvikanganwa isu pachedu. Tinofanira kuve takabatana nezvatinoda uye nheyo nguva dzese.
Zuva rega rega muhupenyu rinofanirwa kuve nechinangwa uye isu tinofanirwa kuve mukutonga kwezvatinoda. Hazvigone kuitika kufanotaura zvichauya nenzira yedu, asi isu tinofanira kuedza kurarama hupenyu nematanho edu nenzira yakanakisa.
Tinofanira kuve nehurongwa hwakajeka mupfungwa hwekuti taizoda sei kuti hupenyu hwedu huenderere mberi munguva pfupi neyakareba. Sezvo uye patinoona shanduko dzichipinda, isu tinofanirwa kuchinjira kwairi uye kufambira mberi. Zviri, hongu, zvakapusa kutaurwa pane kuzviita asi isu tinofanira kuedza nepatinogona napo kurarama nehupenyu uye nekushanduka kwayo.
Mukutsvaga kwekuchinjika uye kufambira mberi, isu tese tinokudziridza denderedzwa revanhu vatinotsamira pariri. Asi panogona kunge paine nguva apo vamwe vanhu vachinyanya kuremerwa uye vangave vanobva mudumbu medu pachavo.
Saka, kutanga kubva kwavari kuenda kune chero munhu wekunze akafungidzira kuti vane simba rekupindira, iwe unofanirwa kudzivirira vanhu vese vakadaro. Dzimwe nguva, isu tinozvivawo isu takanyanya murudo nemunhu zvekuti tinotadza kuzvidzora pachedu. Tinovaregedza kutikunda, nekuda.
Apa ndipo panoda kuzvidzora uye tinofanirwa kungwarira kuti tirege kupa chero munhu ruoko rwepamusoro muhupenyu hwedu zvakanyanya kuti vakwanise kuparadza zuva redu. Kana isu tichikwanisa kugona nzira iyi yekurarama, saka tinokwanisa kuve nehutongi pamusoro pehupenyu hwedu.
Usave Anosuwa Quotes
Pfungwa dzakanaka dzeZuva
Motivational Quotes Yezuva
Yakanakisa Quote Yanhasi
Quotes Pamusoro pevanhu Mune Hupenyu Hwako
Short Quitive Quotes
Short Quote Yezuva
Yakagadzirirwa Nhasi Quotes
Ipfupi kwazvo Quotes
Vanhu vanofara kwazvo havana chakanakisisa pane zvese, ivo vanongo gadzira zvese zvavanazvo. - Asingazivikanwe
Kuti ufare, unofanirwa kuona kuti uri kufara uye kugutsikana nezvose…
Zvinhu zvakanaka zvinoitika kana iwe ukazvisudurura kure negativity. - Asingazivikanwe
Tariro netariro zvinoita kuti tirambe tichienda, zvinotipa simba neushingi hwokutarisana nematambudziko nekuti isu…
Nhanho diki munzira kwayo inogona kuve nhanho hombe yehupenyu hwako. - Asingazivikanwe
Nhanho diki munzira kwayo inogona kuve nhanho hombe yehupenyu hwako. -…
Iva nekutenda kune wese munhu muhupenyu hwako, zvakanaka nezvakaipa, zvekare nezvazvino. Ivo vese vakakuita iwe munhu zvauri nhasi. - Asingazivikanwe
Iva nekutenda kune wese munhu muhupenyu hwako, zvakanaka nezvakaipa, zvakapfuura nezvazvino. Ivo vese vakakuita iwe…
Kungoti munhu anonyemwerera nguva dzese hazvireve kuti hupenyu hwake hwakakwana. Kunyemwerera chiratidzo chetariro nesimba. - Asingazivikanwe
Iwe uchaona mumwe munhu achinyemwerera nguva dzese, asi haufanire kugadzira zvako zvekufungidzira kunze…